Sida Loo Sameeyo SEO U Dhaco 2020 | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/Sida Loo Sameeyo SEO U Dhaco 2020
Sida Loo Sameeyo SEO U Dhaco 2020
Hagaajinta mashiinka raadinta ee waxtarka leh waxay qaadataa diyaarin iyo qorsheyn. Ficilada aan tooska ahayn waxay soo saartaa natiijooyin aan macquul ahayn.
Waa kuwan sida looga dhigo qorshayaasha SEO-gaaga inay noolaadaan 2020.
Talaabada ugu horeysa waa in aad aragti u yeelatid ganacsigaaga iyo hadafyo suuqgeyneed oo u dhigma.
Yoolalka SEO waa qayb-hoosaad. Waxay qeexayaan aragtida raadinta dabiiciga ah ee muddada-dheer. Tixgeli inaad dabaqdo qaabka SMART: gaar ah, la cabbiri karo, la gaari karo, ku habboon, iyo waqti xaddidan. U qoondee milkiile gaar ah aag horumarsan oo leh jadwal dhammaystiran. Yoolalka SEO waa in lagu cabbiraa xogta.
Talaabada ugu horeysa waa in aad aragti u yeelatid ganacsigaaga iyo hadafyo suuqgeyneed oo u dhigma. Yoolalka SEO waa qayb-hoosaadyo.
Si aad uga fogaato gubashada, ka dhig hadafyadaada kuwo run ah. Yoolalka aan la gaari karin, ama yoolalka aan la xiriirin hadafka shirkaddaada, waxay dhiirigeliyaan dabeecadaha aan faa'iido doonka ahayn. Taa beddelkeeda, yoolalku waa inay ku filnaan karaan fidsan si ay kooxda ugu dhiirri galiyaan inay wax u qabtaan.
Cilmi baadhis ku samee wax qabadkeeda goob raadinta dabiiciga ah ee goobtaada iyo waxyaabaha wax ku biiriya Hantidhawrka goobtaada waxay dareemi kartaa culays badan, laakiin waa muhiim inaad fahanto meesha aad ka bilaabayso.
Tignoolajiyada, nuxurka, iyo qaababka isku xidhka gudaha dhamaantood waa isku xidhan yihiin. Isbeddellada hal meel ayaa saameeya kuwa kale. Waxaad si sahal ah u wanaajin kartaa, dheh, goobtaada ecommerce ee beddelka oo aad hoos u dhigto waxqabadkaaga raadinta dabiiciga ah.
Waxqabadka. Ka bilow warbixinta bogga degista ee barnaamijka falanqaynta shabakadaada. Tani waxay tilmaami doontaa boggaga ku yaal boggaaga ee kaxeeya gaadiidkaaga raadinta dabiiciga ah. Booqashooyinka iyo beddelidda ayaa ah tilmaamayaasha waxqabadka muhiimka ah. U beddel warbixinta "Performance" ee ku jirta Google Search Console si aad u hesho xog la isku halayn karo oo ereyada muhiimka ah. Falanqee boggaga waxqabadka sarreeya iyo ereyada muhiimka ah. Waxaa ka sii muhiimsan, raadi meelaha hagaajinta. Waxaa laga yaabaa in bog kasta oo qayb ka mid ah uu soo jiito booqdayaal yar. Ama waxaa laga yaabaa in ereyada muhiimka ah ee hal shay ay u qabtaan si ka liita kuwa kale. Aqoonsiga cilladahaan waxay kaa caawinaysaa in xoogga la saaro dadaalkaaga.
Farsamo. Bogagga ama alaabooyinka aan shaqaynayn, jidgooyada farsamada ayaa ah meesha ugu horeysa ee la eego. Hubi awooda matoorada raadinta ay ku gurguuran karaan goobtaada iyo sidoo kale tilmaamida goobtaada. Marka xigta, tixgeli arrimo kale oo farsamo, sida xawaaraha goobta, amniga HTTPS, macluumaadka nuqul ka mid ah, iyo xogta habaysan.
Mawduuc. Falanqee waxa ku jira boggaaga iyo heerka ay ka tarjumayso danaha iyo ujeeddada dukaamanka iyadoo lagu saleynayo cilmi-baarista ereygaaga muhiimka ah. Xusuusnow inaad diirada saarto jaantusyada taageeraya bog kasta oo ka kooban si aad u aqoonsato fursadaha la miisaami karo ee lagu wanaajin karo bog kasta hal mar. Tusaale ahaan, hal template ayaa lagu hagaajin karaa lix siyaabood si kor loogu qaado waxqabadka dhammaan boggaga qaybta.
Backlinks Warbixinaha "Links" ee Google Search Console waxay bixiyaan liisaska la soo dajin karo ee goob kasta ama bog kasta oo ku xidha kaaga. Ka miir xogta si aad u go'aamiso xajmiga iyo tayada boggaaga isku xidhka. Ka raadi xiriirinta goobaha tayada hooseeya ama calaamadaha in qaar badan oo ka mid ah xiriiriyadu ay ka yimaadeen boggaga kale ee shirkaddaadu leedahay. Qayb ka mid ah istaraatiijiyadaada 2020 waa in ay diiradda saartaa sidii aad u heli lahayd xiriiryo dibadeed oo tayo sare leh.
Tartan. Ugu dambeyntii, qiimee tartamayaashaada raadinta dabiiciga ah. Waxay inta badan ka duwan yihiin dhigooda warshadaha cad. Tartamayaasha-raadinta dabiiciga ah waa goobaha ku darajo halka aad rabto inaad noqoto. Aqoonso meelaha soo saara darajooyinkaas, si aad wax u barato.
Iyada oo ku saleysan xisaab-celinta SEO ee goobtaada iyo tartamayaashaada, horumarinta mashaariicda si loo horumariyo waxqabadka. U fiirso tignoolajiyada goobtaada, waxa ku jira, iyo xidhiidhinta dhabarka.
Midkee ka mid ah meelahaas - ama isku-dhafka - waxay u badan tahay inay soo saaraan kor u kaca si aad ula kulanto yoolalkaaga SEO? Aladee soo saara, hagaajinta goobta, ciidaha, ama dhibcaha xilliyeedka ayaad u baahan tahay inaad qorsheysato?
Isku darka mashaariicda iyo mudnaanta ganacsiga ayaa qaabeeya istaraatiijiyada SEO. Jadwalka sanadka oo dhan waxay abuurtaa khariidaddaada.
Miisaaniyadu waa arrin kale. Haddii miisaaniyada hore loo dejiyay, waxa laga yaabaa inay xaddiddo horumarka, gaar ahaan haddii aad leedahay yoolal sare.
Istaraatiijiyadaada iyo khariidadda dariiqa ayaa laga yaabaa inay si fiican ugu muuqdaan warqad. Waxay u badan tahay, si kastaba ha ahaatee, labaduba way isbeddeli doonaan sanadka marka ganacsigu isbeddelo, tartamayaashu waxay kor u qaadaan waxqabadkooda SEO, iyo matoorada raadinta waxay cusbooneysiiyaan algorithms. Qorshayso guusha laakiin dib u eeg qorshaha sanadka oo dhan. Hagaaji haddii loo baahdo.
Sida loo hagaajiyo 16-inch MacBook Pro ee cusub ee gujinaya ku hadla
Xayeysiinta Google Hada Waxay Kujirtaa Meelaha Fidinta Si otomaatig ah